तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो रहेछ साउन महिनामा चार सोमबारको महत्व | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो रहेछ साउन महिनामा चार सोमबारको महत्व
सन् २०१८ अर्थात् यसपाली आउंदै गरेको साउन महिनाका सोमबार झन् धेरै शुभ संयोग लियर आउने रहेको ज्योतिषहरुले बताएका छन् । यसपाली साउन महिना जुलाई २८, २०१८ (शनिबार) देखि सुरु हुँदैछ। जुन २६ अगस्ट, श्रावण पूर्णिमा को दिन बाट समाप्त हुनेछ। यस वर्ष साउन महिनामा १९ साल पछिको शुभ संयोग रहेको बताइएको छ ।
साउन महिनाको पहिलो सोमबारको वर्तले जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउने र सोचेभन्दा बढी प्रगति हुनेगर्छ । साथै जीवनमा आइपर्ने बाधा सँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ । यदि तपाईं लामो समयको लागि कुनै नयाँ कार्य सुरु गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ।
तर सफलता मिल्ने हो -होइन भन्ने चिन्ता गर्नुहुन्छ भने तपाई यो दिन वर्त बसेर आफ्नो कार्य सुरुवात गर्नुभएमा तपाईलाई अवस्य सफलता मिल्ने छ र तपाईको दीर्घकालीन योजनाहरू सफल हुदै जानेछन्। व्यवसाय सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि वर्त बसेर भगवान शिवको आरधना गरि यसदिन बाट सुरुवात गरेमा सच्चिनै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ।
साउनको तेस्रो सोमबार वर्त बसी पुजापाठ गरेमा आफूले चिताएका कुराहरु पुरा हुदैँ जानेछन् । यस दिनमा वर्त बसेर भगवान शिवका मन्त्रहरु पाठ गरि पूजा गर्नु पर्नेछ ।
शिव भक्तहरुको लागि यो पनि धेरै विशेष हुनेछ जो शिव को मन्त्र सिद्ध गर्न चाहन्छन। तपाईसँग भएका समस्याहरु र तपाईहरुले सोचेका र अटेका कामहरु वर्त बसेर पूजा गर्ने क्रममा आफूले मनमनै सम्झिनु भयो भने यी कुराहरु छिटै तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नु को साथै समस्या हरु बिस्तारै हल हुदैँ जनेछन् ।
त्यस्ता व्यक्तिको जीवनमा ठुलो उन्नति र प्रगति हुनेछ । साथै उसले सोचेका तथा अटेका कामहरु सबै पुरा हुदैँ जनेछन् जसले गर्दा भबिष्य उज्जोल बनाउन मद्धत हुनेछ ।
Previous post: जन्म महिना अनुसार महिलाहरुको स्वभाव
Next post: बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा सुन लिएर आएका दुई जना पक्राउ